Suuqa Kala Iibsiga: Manchester United Oo Sadex Xidig Ka Dooneysa Atletico Madrid & Carrasco Oo Ku Jira |
Suuqa Kala Iibsiga: Manchester United Oo Sadex Xidig Ka Dooneysa Atletico Madrid & Carrasco Oo Ku Jira
Jose Mourinho ayaa qorsheynaya inuu sadex ciyaartoy oo muhiim ah kasoo qaato Atletico Madrid isagoo aaminsan in Manchester United ay tartan culus u gali karto hanashada horyaalka Ingiriiska.
Mirror ayaa horay u shaacisay in Red Devils ay xiiso ba’an u qabtay weeraryahanka reer France Antoine Griezmann iyo daafaca reer Uruguay Jose Gimenez, balse markaan waxaa lagu soo daray liiska madaalaha reer Belgium Yannick Carrasco, waxeyna wakiilo ka socda Man United daawadeen ciyaartii ay todobaadkii hore barbaraha la galeen xulka Holland.
Macalinkii hore Chelsea, Real Madrid iyo Inter Milan ayaa fahansan in kooxdiisa ay u baahan tahay dib u habeyn xoog leh iyadoo haatan aysan si toos ah uga mid aheyn kooxaha loo saadaalinayo ku guuleysiga horyaalka Ingiriiska.
Griezmann oo ku jira ciyaartoyda loo saadalinayo iney ku guuleystaan xiddiga ugu wanaagsan dunida waxaa sidoo kale ku raad jooga Manchester City iyo Chelsea, balse 25-jirkaan wuxuu xiiseynayaa inuu ka hoos ciyaaro Paul Pogba.
Lama oga hadii Red Devils ay bixin karto qiimaha lagu jabin karo heshiiskiisa oo ah 80 Malyan Oo Pound, balse Jose wuxuu doonayaa inuu ku kaabo ciyaartoyda sii gabowday ee Wayne Rooney iyo Zlatan Ibrahimovic.
Dhanka kale macalinka reer Portugal ayaa goor hore ishaartay Gimenez si uu ugu xoojiyo kooxdiisa madama ay daciifnimo halkaas ka jirto, sidoo kalana Carrasco wuxuu doonayaa inuu ku buuxiyo booska uu baneynayo Memphis Depay oo aan loo arkin inuu kooxda kusii nagaan karo.